Rogue umkhaza umtshina - MT4 Izinkomba
Ikhaya MT4 Izinkomba Rogue umkhaza umtshina
Rogue umkhaza umtshina
Ithuluzi ukusiza ukugcina umlando idatha lunembile ngempumelelo ukuhlolwa emuva nokunye.
Abahwebi yazo zonke izinhlobo ngokuya bathembele ezenzakalelayo zokuhweba kanye ngokwezifiso izifundo amakhono mt4 ukuba lelisu amasu abo zokucabangela zingagadiwe. Ukubulawa la mathuluzi ancike okokufaka eyinhloko: intengo okuphakelayo. Intengo quote ngasinye esisha ibhidi / cela ulwazi kufika ku umkhaza entsha. Uma okuphakelayo intengo iqukethe imikhaza ubudala noma lidala, ke kungenzeka ukuthi intengo othulwe ayisavumelekile. Nokho, lapho ngidayisa nge-algorithm, abadayisi ngeke ukwazi umehluko esheshayo ngokwanele ukwenza nje ngokubheka ishadi kuze sezigcwalisekile, ngisho noma umehluko intengo lalibalulekile ezanele ukuze abone zibukeke.
Logic eziyisisekelo Rogue umkhaza umtshina thuluzi kanje:
Inani okuphakelayo lwento (wamanje amanani ukwenyuka, incipha, noma ihlala isihlobo esifanayo intengo esedlule), futhi lesisho amanani ngamunye (umkhaza) okufanele ube yikho ezilandelanayo. Okusho ngentengo quote isitembu sesikhathi 12:20:25 Kufanele ufike njalo futhi babalwe yesikhulumi ngaphambi quote isitembu sesikhathi 12:20:26. Uma 12:20:25 isitembu kuza ngemuva 12:20:26, ke umyalezo wephutha livela, noma okuzivelelayo, imeyili, kanye / noma ebhaliwe lwamakholi format. Ilogo kuyodingeka igama uphawu, umkhaza elinamandla, futhi umkhaza ibhidi odlule / ukubuza kanye nemininingwane yesikhathi-isitembu.
Hlola umkhaza engenayo (tick0) Isitembu sesikhathi bese uqhathanisa zangaphambilini umkhaza isitembu sesikhathi (uphawu-1). Uma umkhaza 0 isitembu sesikhathi < umkhaza -1, ke umlando isaziso.
Izinketho okuzivelelayo, imeyili, futhi ehlukile ifayela lokungena konke kungenzeka. Uma udinga ukuthumela ubufakazi ukuba broker noma uMklami, ungase usebenzise ehlukile ifayela lokungena uma ungafuni ukusebenzisa uchwepheshe izingodo. Qinisekisa i-akhawunti yakho ukuze umehluko sikhathi njengoba lwamakholi uchwepheshe bazorekhoda isikhathi kukhompyutha yakho yendawo, kanye Isitembu sesikhathi of imikhaza kuyoba mt4 emakethe sokubukwa
ukufakwa: Kopisha RogueTickDetector.mq4 noma ex4 ukuze [ifolda metatrader4]expertsindicators . metatrader Qala kabusha 4 bese kufanele ubone inkomba entsha e itilosi ngaphansi 'ngokwezifiso izinkomba’ ifolda. Hudula RogueTickDetector ungene iyiphi Ishadi uphawu ofuna ukulandelela. It is possible to run several ezahlukene indicators simultaneously on the same chart, kodwa munye kuphela senzakalo RogueTickDetector ngamunye uphawu zilandelwa kuyadingeka.
Ifayela lokungena kuzoba [ifolda metatrader4]expertsfiles
amanothi: There could be legitimate reasons why rogue ticks are detected on a sporadic basis (izikhathi ezimbalwa max usuku). Kodwa ngokuvamile izikhathi lapho pair Uvele uhlangabezana elinamandla eziningana imikhaza ngomzuzu noma ngehora (kungakhathaliseki simo esishubile uphawu), it is kungenzeka that it is intentional price feed manipulation. Hlola ukuze ubone uma nezinye izinhlobo nomthengisi kokungenela likhona (ukukhishwa / ukugcwalisa ukubambezeleka, slippage quin, ngokweqile kabusha izingcaphuno, iyanqamula engavamile, njll). Godu hlola ekugcineni lo ukubambezeleka kusukela ukugcina mt4 kwiseva kanye izinga internet uxhumano.
Ngokuvamile intengo ukondla imikhaza elinamandla Uyi yi yenkinga ohlangothini nomdayisi, njengoba thina ujwayele ukusebenzisa ithuluzi ku izinga VPS iseva e-New York nge 100% ikhanya isiqinisekiso. Iseva efanayo kuyodingeka amaningi bukhoma futhi demo akhawunti nge wabathengi amaningi ngidayisa efanayo kwemali ngazimbili; kodwa kuphela wabathengi kubonakala bembalwa banenkinga njalo. Noma broker akasoze abe le nkinga, kodwa ngokushesha kuzokwenzeka kakhulu njalo.
Njengoba isebenzisa ezimbalwa kakhulu imithombo ikhompyutha, sincoma bonke abadayisi abazisa zamanani ezinembile kucabange ukusebenzisa leli thuluzi noma into efana nalokho.
Rogue umkhaza umtshina kuyinto Metatrader 4 (MT4) Inkomba futhi ngokuyisisekelo inkomba forex iwukuba uguqule umlando idatha zanqwabelana.
Rogue umkhaza umtshina inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama.
Indlela ukufaka Rogue umkhaza detector.mq4?
Download Rogue umkhaza detector.mq4
Kopisha Rogue umkhaza detector.mq4 ukuze Metatrader yakho Directory / ochwepheshe / Izinkomba /
Right uchofoze Rogue umkhaza detector.mq4
Inkomba Rogue umkhaza detector.mq4 itholakala ku Ishadi yakho
Indlela ukususa Rogue umkhaza detector.mq4 kusukela Metatrader yakho 4 Ishadi?
esihlokweni esanduleleGuppy (Eside iDemo)
esihlokweni esilandelayoRSO, Isihlobo Amandla oscillator